Ndezvipi zvinokonzera kukonzerwa nemimba yemakumbo? Kune mazano akawanda pane izvi. Vamwe vanhu vanoti hazvina hutachiwana. Vamwe vanhu vanoti zvinodzvinyirira. Uye vamwe vakawanda vanhu vanodavira kuti ndeyekuti zvishoma nezvishoma metabolism. Saka chii chiri chokwadi? Muzvokwadi, inenge nguva dzose inokonzerwa nemafungiro asinganzwisisiki uye mararamiro asina simba.
Kudya kunosanganisira zvakawanda zvekudya zvekudya zvizere. Murairo wekutanga wekuyeuka ndeyekudzivisa chero kudya kupi uko kunoshandiswa. Ichi chirongwa chine simba asi chiri nyore icho vazhinji vakashandisa kuderedza dumbu ravo mafuta. Nguva yaunenge uchidya nayo inokoshawo. Sezvakazara, ingova nechinangwa chekurega kudya munguva yakareba yekusashanda. Kune vanhu vazhinji, izvi zvingave zvakanonoka manheru asati atara.
Nemhaka yokuti iwe hauna kushanda zvakakwana kuti upise makirori, izvi kazhinji chimwe chezvikonzero nei zvichiwanzokurudzirwa kuti usadye usati warara. Muviri unongopedza kugadzirisa zvakawanda zvezvibereko semafuta. Ingodya imwe michero uye miviri yega kana iwe uine nzara munguva dzisina kushanda. Kana iwe uri kutsvaga zviri nyore kutevera urongwa, tarisa Edya Stop Eat purogiramu iyo yakanaka kune varume nevakadzi vezera rose. Imwe hurongwa hunozivikanwa hwekusimudzika kwekurema kwatinoti tinokurudzira kuti uve 4 Week Week Diet naBrian Flatt.
Kunyangwe iwe ukasarudza chimwe chezvirongwa zvatave tataura kana kwete, chinokosha pamusoro pekureruka kwekurara ndechekuti chirongwa chekudya chako chakakosha sekushanda kwako. Sei uchida kuparadza nguva yose muimba yekurovedza kana uchangotya semarara? Iva nechokwadi chekuchinja mararamiro ako uye edza kuva wakashanda. Icho ndicho chinonyanya kukosha mazano atinogona kukupa.
* Ndeipi nzira yakanakisisa yekuita basa?
Pasinei nezvamunonzwa, haisi kutamba pamusoro pezvinyorwa zvemaawa akawanda. Mafuta anopisa migumisiro ekumhanya yakawanda kwazvo, uye iwe unofanirwa kumhanyira kwenguva inoshamisa kwenguva yakareba kuti uone migumisiro inokosha.
Tora Zvigunwe & Chiseled mu 30-Mazuva ane Chirwere Chemuviri Weight
Flat Belly Fast ndiyo chirongwa chitsva chekuita basa chakagadzirwa nomudzidzisi wega Danette May. Zvinhu zvinotyisa pamusoro Flat Belly Fast ndeyekuti Danette May ari kupa chirongwa chake paDVD nokuda kweHURI iwe unongofanira kubhadhara kutengesa saka zvakakodzera kuongorora. Flat Belly Fast inosanganisirawo zuva re10 kudya chirongwa nemafuta ane utano hwekupisa.
Pakaitwa nzira yakarurama, iyi ndeimwe yenzira dzakanakisisa dzokubvisa dumbu mafuta. Hezvino izvo zvaunoda kuita: tanga kurara kumashure pakubwinya kwebhora, uchiva nechokwadi kuti pasi nepamapapiro ako kumashure zviri kuendeswa mberi.
Iva nechokwadi kuti uchinje mabvi ako uye usarega tsoka dzako dzichibva pasi. Ikozvino isa maoko ako shure kwako uye uzvimise iwe sewe iwe ungadai uri mumamiriro ezvinhu akafanana ... uye zvino zvishoma nezvishoma uchidzokera kunzvimbo yekutanga.
Pakupedzisira asi kwete, kiyi yekubudirira kwekutakura kwemahombe ndeyekusagadzikana. Iva nechokwadi chekuti uve nechirongwa chinoratidzwa uye uchitora chisingaverengeki uye chigadziriswa chiito kuti uwane zvinorema zvinowanikwa zvido zvaunoda. Nokuti vanhu vakawanda havana chinangwa chakanaka, vanhu vakawanda vanotanga nemitambo yekudzidzira uye vanomira vhiki dzinoverengeka mariri iyo inosuruvarisa zvikuru.
Ichi ndicho chikonzero maitiro epurogiramu akaita se 1 Hour Belly Blast uye Danette May FREE FREE Belly DVD Dhizha zvinoshanda. Zvirongwa izvi ndezvenguva yakatarwa, uye iwe unonyatsoziva zvaunofanira kuita zuva rega rega. Zvose zvaunoda kuita ndezotevera purogiramu yekuona migumisiro yaunoda. Izvi zvinoshandiswa uye kusagadzikana zvichava shamwari yako yakanakisisa kana iri kusvika pakuwana muviri unoda. Ngationei pfungwa dzenyu munyaya ino mumashoko ari pasi apa uye inzwa wakasununguka kugovera chero hupi hupi humwe uremu hunorema huripo hwaunahwo